"ငအ, ထွက်သွားတော့ ငလိမ် အ,ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်" ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:16 PM | No မှတ်ချက် | Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ
ငအတစ်ယောက်ကို ငလိမ်တစ်ယောက်တွေ့တော့ ငလိမ်ကပြောတယ်.. . “ငါ့မှာသာ ချိုချဉ်တစ်လုံးရှိရင် နင့်ကိုတကယ်ပေးမှာ”တဲ့။ . ငအ တစ်ချက်စဉ်းစားပြီး အိတ်ကပ်ထဲကချိုချဉ်တစ်လုံးကို ငလိမ်လက်ထဲ ထိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ . ငလိမ်က ထပ်ပြောတယ်… “တကယ်လို့ ငါ့မှာချိုချဉ်အများကြီးရှိရင် နင့်ကိုအကုန်လုံးပေးတယ်”တဲ့။ . ငလိမ်ရဲ့အပြောမှာ ငအခံစားသက်ဝင်ပြီး မျက်ရည်တောင်ဝဲမိတယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ချိုချဉ်တွေအားလုံး ငလိမ်လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ငအမှာချိုချဉ်တွေမရှိတော့မှန်း ငလိမ်သိတော့ ငအကိုထားပြီး ထွက်သွားခဲ့တယ်။ .
ငလိမ်ထွက်သွားတာကိုမြင်တော့ ငအ ပျာယာခတ်တော့တယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတာတွေ အကုန်ပေးပြီးပြီလို့ ရှင်းပြချင်နေခဲ့တယ်။ ရှိတာအကုန်လုံးပေးလိုက်တာတောင် ငလိမ် မတုန်လှုပ်တော့ ငအက ကိုယ့်နှလုံးသားကိုထုတ်ပြီး ငလိမ်လက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ . ငလိမ်က အပူလောင်သလိုမျိုး ငအထည့်ပေးလိုက်တဲ့နှလုံးသားကို အဝေးကြီးပစ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ .
အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကြေသွားတဲ့ နှလုံးသားကို ငအတစ်ခုချင်းကောက်ယူလိုက်တယ်။ ငလိမ်က အပြောပဲရှိတယ်… တကယ်တမ်း ဘာမှလည်း ပြန်မပေးခဲ့မှန်း ငအသိလိုက်တယ်။ . ငအ ငိုမိတယ်… သူ အ,တာ ကိစ္စမရှိဘူး… ချိုချဉ်တွေ သူအကုန်ပေးလိုက်တာလည်း ကိစ္စမရှိဘူး.. သူ့နှလုံးသား လွင့်ပစ်ခံရတာလည်း ကိစ္စမရှိဘူး… ဒါပေမယ့် သူ့နှလုံးသားကို ငလိမ်လွင့်ပစ်လိုက်တဲ့ ပုံစံက ပြတ်သားလိုက်တာ၊ စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာအထင်သေးတဲ့ပုံနဲ့… . ငအထွက်သွားခဲ့ပြီ… ငလိမ် အ,ပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်… . ငါတို့ဒီတစ်သက်မှာ…
ဘယ်သူ ငလိမ်နဲ့ မတွေ့ခဲ့ဖူးလဲ…
ဘယ်သူ ငအ မဖြစ်ခဲ့ဖူးလဲ…
ဒါလေးဖတ်မိတော့ ကိုယ်လည်း တစ်ချိန်က ငအဖြစ်ခဲ့တာကို သတိရမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြေသာခဲ့ပါတယ်.. အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်ငလိမ် မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူးလေ...
wechat မှာဖတ်မိတာလေး ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်.. .
#NineNineSaNay (Sep. 1. 2016)